International Hotel Mashaariicda - Hotel Armati Project In Europe
Hotel Armati Project In Europe
Mid ka mid ah Armati 5 bilaabaan mashruuca hotel ee Europe, soo dhaweynayaa in ay booqo hotel this si ay u arkaan our qasabada.
Armati 413 catalouge qasabada taxane fadlan hubi soo socda:
Dhinacyada wadada Florence-Siena, mid yaababkii waxa dhismaha cusub iyo higayaa, in aan ka heli tuulada Bargino (dhow San Casciano Val di Pesa), ayaa laga yaabaa.
Waa winary Antinori cusub ee, natiijada mashruuca hami xoogan u doonaya Antinori ee Qoyska, kuwaas oo khamri ka ab 26 soo saarta iyo, ka dib markii shan qarniyo, dhaqdhaqaaqa ay xarunta ka xarunta of Florence si ay qalbiga "Chianti Classico" .Waxaa Maqsin ahaa dhisay qoda ku lahaa kur dibna daboolaya dhismaha dhulka.
Mashruuca of winery cusub (in uu ixtiraam weyn u deegaanka Tuscan iyo muuqaalka) waa mid gaar ah, sababtoo ah isku daraa tabo cusub naqshadda iyo farsamooyinka casriga ah ee samaynta khamri la dhaqanka qoyska Antinori ee.
hotel Tani opend on February 2013.
Mashruuca musqusha Hotel ee Europe
hotel qasabada biyaha musqusha mashruuca